Zimbabwean President Robert Mugabe (R) and Prime Minister Morgan Tsvangirai in Harare, April 18, 2011.
HARARE — Zimbabwe’s President Robert Mugabe wants to hold a general election next March, ruling out by-elections ordered by courts earlier this year. Mugabe's coalition goverment partner, Morgan Tsvangirai, is not happy with President Mugabe's election timetable and wants a new constitution and reforms before a general election is held.
Court papers show President Mugabe says Zimbabwe cannot afford to hold court ordered by-elections to fill at least 26 vacant seats in parliament. He just wants a general election the last week of March, 2013.
Zimbabwe Justice Minister Patrick Chinamasa in an interview said it is just not possible to follow a Supreme Court order to hold the by-elections.
"It is nonsensical anyway to have by-elections three months before harmonized [general] elections. For that reason we are applying for an extension which would [have] the by-elections would be subsumed into the harmonized which are anticipated in March next year," said Chinamasa.
The last elections in Zimbabwe were held in 2008 and many regional leaders nullified the results citing violence targeting the MDC party of Mr. Mugabe's coalition partner Prime Minister Morgan Tsvangirai.
Rindai Chipfunde-Vava from the Zimbabwe Support Network (ZESN) believes no elections should be held until Zimbabwe has reforms in place.